di Davide Sabbatini - Disemba 9, 2021
Ajụjụ anyị na-ajụ onwe anyị taa na-agabiga nhụsianya echiche dị mfe, nke a abụghị isi okwu. Ma anyị chọrọ ịbanye n'echiche ndị na-ejikọta onye ọ bụla n'ime anyị. Ego ole ka ememe Krismas na-anọchi anya anyị ọmụmụ Kraịst, ọ bụghị ihe a na-akpọ ihe omume ndị ọgọ mmụọ?
Jizọs n'ime obi ka ọ bụ na ihe ịchọ mma?
Icho mma ụlọ, gaa ịzụ ahịa ekeresimesi, gaa na Ememme ekeresimesi, dee akwụkwọ ozi a Babbo natale, Ịkwadebe nri dị mma, na-agba agba, na-eme atụmatụ ụbọchị ezumike, bụ ihe omume ntụrụndụ na-egosi oge ọṅụ, ịdị jụụ n'ọnọdụ ihu igwe na-adịkarịghị anabata mmetụta ịhụnanya. Mana ole ka a na-eme ihe a niile iji kwado icheta ọmụmụ Kraịst, iji mee mmemme kacha mkpa maka mmadụ?
Naanị ihe atụ nke ikpere arụsị: nye anyị Ndị Kraịst, ikpere arụsị bụ ihe ọ bụla na-esiteghị na Akwụkwọ Nsọ, ma ọ bụ site na nkọwa, onye ọgọ mmụọ bụ onye nwere nkwenkwe okpukpe dị iche na nke okpukpe ndị bụ isi nke ụwa, ya mere onye ọ bụla na-abụghị usoro nke ha. A na-ewere nkwenkwe ndị ọgọ mmụọ.
Ọbụna ndị na-ekweghị na Jizọs na-agba Krismas, dị ka anyị na-eme. Kedu ihe nke a pụtara?
ThePọl onyeozi otu o sila dị ọ kuziri anyị ka anyị na-ebi ndụ na ndịiche nke anyị niile nwere (Rm 14). Ọ maara na anyị niile nwere nzụlite dị iche iche, ụdị ịzụ ụmụ, nkà, ikike na usoro nkwenye, ma anyị niile kwenyere na isi ihe; ịdị-nsọ nke Kraịst, izu-oke nke mmehie ya, na na Ọ na-alọghachi ọzọ ikpe ụwa ikpe n’ezi omume. A na-azọpụta mmadụ naanị site n'okwukwe na Kraịst, na nzọpụta adịghị emetụta ya n'ihi na ọ naghị aghọta ihe niile. Maka otu onye ihe nwere ike ọ gaghị abụ mmehie, ma onye ọzọ ọ nwere ike ịbụ, dịka Onyeozi kwuru.
Idem ndusụk n̄kpọ oro mme apostle ẹkesịnede ẹdi mme oku mme okpono ndem ẹnyụn̄ ẹda ẹkpono mmọ.
Kedu ihe dị iche bụ obi, olee ebe obi gị nọ? Ònye ka ọ na-ezubere ya? Kedu ihe ị na-eche mgbe ị na-achọ ụlọ gị mma, ka ị na-akwado ime ekeresimesi?